राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि स्कलर्स होम एकेडेमी रुपन्दहीको कब्जामा (तस्वीरसहित) – Saurahaonline.com
राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि स्कलर्स होम एकेडेमी रुपन्दहीको कब्जामा (तस्वीरसहित)
सौराहा अनलाइन | २०७२, २७ फाल्गुन बिहीबार
चितवन, २६ फागुन । तेस्रो अन्तर विद्यालय राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता २०७२ को उपाधि स्कलर्स होम एकेडेमी रुपन्दहीले जितेको छ ।
स्कलर्स होम एकेडेमी रुपन्दही
चितवनको भरतपुरमा भएको फाइनल खेलमा माइलस्टोन इङ्गलिस बोर्डिङ स्कुल कञ्चनपुरसँग स्कलर्स होमले बराबरी खेलेपछि ट्राइबेकरमा स्कलर्स होम विजयी टिम छनौट गरिएको हो ।
निर्धारित ९० मिनेटको खेलमा दुवै तर्फबाट गोल रहित बराबरी खेलेपछि ट्राइबेकरमा स्कलर्स होम एकेडेमीले २ गोलका विरुद्ध ४ गोल गर्दै उपाधी चुम्न सफल भएको हो । जितसँगै स्कलर्स होमले नगद २५ हजार रुपैयाँसँगै ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र हात पा¥यो । उप विजेतामा चित्त बुझाउन बाध्य भएको माइल स्टोन ई. बोर्डिङ स्कुलले १५ हजार रुपैयाँसगै ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र हात पा¥यो ।
प्रतियोगिताका हाइ गोल स्कोरर स्कलर्स होमका अनुप गुरुङ भएका छन् । त्यसैगरी, बेष्ट प्लेयर माइल स्टोन ई. बोर्डिङ स्कुलका भोजराज पन्त भएका छन् भने बेष्ट गोल किपरको उपाधी स्कलर्स होमका खेलाडी किरण क्षेत्रीले हात पारे ।
प्रतियोगितको समापन तथा पुरस्कार वितरण समारोहका प्रमुख अतिथि जुनियर प्रहरी अधिकृत शिक्षालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक रणबहादुर चन्द रहेका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला खेलकुद विकास समिति चितवनका अध्यक्ष गंगाबहादुर लामा, नेपाल विद्यालय फुटबल संघका उपाध्यक्ष रन्नबहादुर गुरुङ, सचिव आरपी कटवाल, भरतपुर इंग्लिस स्कुल सोसाइटी बेसका अध्यक्ष मोहन लामा, चितवन जिल्ला फुटबल संघका सचिव विष्णु बहादुर बस्नेत, सल्लाहकार केशव श्रेष्ठ लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । कार्यक्रम चितवन जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष धनप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको थियो । यस्तै दोस्रो अन्तर विद्यालय राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि मोरङको सार्वजनिक माध्यमिक विद्यालयले कब्जा गरेको छ । कालिका उच्च मावि ज्योतिनगर चितवनसँगको भएको फाइनमा दुवै समूहले गोल रहित बराबरीमा खेलेपछि ट्राइबेकरमा मोरङ विजयी भएको हो । फाइनल खेलमा दुवै समूहले निर्धारित ९० मिनेटको खेलमा गोल गर्न नसकेपछि ट्राइबेकरका आधारमा मोरङको सार्वजनिक मावि च्याम्पियन भएको हो ।
प्रतियोगिताको विजयी भएसँगै सार्वजनिक माविले नगद २५ हजार रुपैयाँ सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र हासिल ग¥यो । खेलको उपविजेतामा चित्त बुझाउन बाध्य भएको कालिका उच्च माविले नगद १५ हजार रुपैयाँ सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र हासिल गरेको छ । त्यस्तै, प्रतियोगितामा सार्वजनिक माविका खेलाडी सुनिल धिमाल बेष्ट गोल किपर र कालिका उच्च माविका पवन अधिकारी वेष्ट प्लेयर भएका छन् ।
गत वैशाखमा हुनुपर्ने दोस्रो अन्तर विद्यालय राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता नेपालमा आएको भूकम्पका कारण रोकिएको थियो ।
भूकम्पले पछि धकेलेको प्रतियोगिता मंगलबारदेखि चितवनमा सञ्चालन गरिएको थियो । प्रतियोगितामा जिल्ला, अञ्चल र क्षेत्रस्तरबाट विजयी भएर आएका १२ जिल्लाका १२ वटा विद्यालयका टिम सहभागी थिए ।
इंग्ल्याण्ड समूह विजेता बन्दै युरोकपको नकआउटमा २०७८, ९ असार बुधबार
क्रोएसिया युरोकपको नकआउटमा २०७८, ९ असार बुधबार